အကောင်းဆုံးကားသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များ, Eco ကားရေချိုးထောက်ပံ့ကုန် | Ops နည်းပညာ
ပင်မစာမျက်နှာ / ထုတ်ကုန်များ
ယင်း အစွမ်းထက် Touchless မော်တော်ကားရေချိုး Powderမြင့်ထိရောက်မှုစင်ကြယ်သောထိန်းသိမ်းဖယောင်း finish ကိုဆင်းအရောင်ကားတစ်စီးမျက်နှာပြင်ထွက်ခွာ, ဖုန်, အညစျအကွေး, shellac, ornithocopros နှင့်စသည်တို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သန့်ရှင်းရေးနိုင်စွမ်းကိုကမ်းလှမ်းပူသို့မဟုတ်ရေအေးအတွက်ချက်ချင်းအရည်ပျော်သွားပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် Eco-friendly! အမျိုးမျိုးသောယာဉ်များဆေးကြောဘို့စံပြ။
လိုအပ် pre-အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ရေမြှုပ်ရှင်းလင်း, ရေနှင့်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကိုသိမ်းဆည်းမရှိပါ!
မော်တော်ယာဉ်အစီး ၄၀ ကျော်ကိုအိတ် ၅၀၀ ဂရမ်အမှုန့်တစ်မျိုးတည်းသာယူနိုင်သည်။
SGS, TUV, CNAS Eco-friendly ကားရေဆေးအမှုန့်အတည်ပြုခဲ့သည်။
ဘီးအချက်အချာပျော်စေ လက်စွဲပွတ်တိုက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်နှင့် clean.The Ops သံမဏိလက်စွပ် Self-သန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်သင့်လျော်သော, etc ရေနံအစွန်းအထင်း, သတ္တုအောက်ဆိုဒ်, ဘရိတ်အမှုန့်, သံမှုန့်, ကာဗွန်အစစ်ခံအပေါ်အထူးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖျန်းခေါင်းနှင့်ရေသေနတ်မလိုအပ်ပါဘူး အမျိုးမျိုးသောဘီးအချက်အချာမျက်နှာပြင်များအဘို့,
ဒါဟာလျင်မြန်စွာရေအတွက်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည့် surfactant, အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။
ကျန်ကြွင်းမရှိဘဲအပင်တစ်ပင်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Citrus ရေနံ extract သဘာဝနှင့်ဂေဟစနစ်အင်ဇိုင်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ထိရောက်စွာသန့်ရှင်းရေးအတွက်ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပယာဉ်သို့မဟုတ်အိမ်သူအိမ်သားခေါင်းမာအစွန်းအထင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းတို့အတွက်သက်ဆိုင်သည်နှင့် ပိုင်ထိုက်သောအနံ့ဖယ်ရှားခြင်း.
ပြင်းပြင်းထန်ထန်, အမှိုက်ကိုဖယ်ရှား vechicle သို့မဟုတ်အိမ်တော်အဘို့လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေဆောင်ခဲ့ရမည်။
တစ်ဦးကနည်းနည်းပေါ့ပါးအဝါရောင်အမှုန့်, အပြည့်အဝ Eco-friendly ထုတ်ကုန်
တဦးတည်းသတ္တုပါးအိတ်သို့မဟုတ်ပလပ်စတစ် box ထဲမှာထုပ်ပိုး 500g အမှုန့်။
လိမ္မော်ရောင်အင်ဇိုင်းဆပ်ပြာ၏တစ်ဦးကကျုံးရေသန့်ရှင်းရေး 500ml မှတူညီနိုင်!
ကားရှေ့မှနျအဝတ်လျှော် Tablet များ
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကားကားရှေ့မှနျ Effervescent သန့်ရှင်းရေး Tablet များပိုပြီးအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, ထိုအဝတ်လျှော်ဆေးပြားများ၏တိုးတက်လာသောပုံသေနည်း။ effervescent သန့်ရှင်းရေးဆေးပြားတစ်အပိုင်းအစကားရှေ့မှနျ Wiper အရည် 4L နှင့်အတူဖလှယ်နိုင်ပါသည်, ထိုအရည်သိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ပုံမှန်အသံအတိုးအကျယ်အဆိုအရ, အစားထိုးခြင်းနှင့်အစဉ်အလာဖန်ရေထက်သာလွန်ဖြစ်နိုင်သည့်ရေတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း, ပါ!
ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးကားကိုကားရှေ့မှနျ effervescent တက်ဘလက်မရှိဓာတုအရောင်ချွတ်အရောင်တင်။
ဒီထုတ်ကုန် high-performance ကိုသန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်သည်။
all-in-One ကို Effervescent Tablet များ
အိမ်မှာသန့်ရှင်းရေးအပေါ်လျော့နည်းပိုက်ဆံဖြုန်း ဘက်စုံသုံးထိရောက်သောရေမှုန်ရေမွှားသန့်စင်စက်နှင့်အတူထုတ်ကုန်များ! ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆေးတောင့်များသည်အ ၀ တ်အထည်၊ မီးဖိုချောင်မှမျက်နှာဖုံးအစွန်းများ၊ ရေချိုးခန်းကြွေပြားအစွန်းများ၊ အိမ်တွင်းပရိဘောဂများ၊ မီးခွက်အရောင်များ၊ လှပတောက်ပသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ကားထားခဲ့ပါ!
ပို Eco-friendly လုံခြုံနှင့် Non-အဆိပ်သင့်မှုနှင့်အတူ!